विश्वकप हेर्न इंग्ल्याण्डका कयौं नागरिकले विवाहको मिति सारे ! – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप हेर्न इंग्ल्याण्डका कयौं नागरिकले विवाहको मिति सारे !
मस्को । रसियामा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत १२ वर्षपछि इंग्ल्याण्ड अन्तिम आठमा पुग्न सफल भएको छ । उसले अब अन्तिम ४ का लागि भोली स्वीडेनको सामना गर्दैछ । यो खेल हेर्नका लागि इंग्ल्याण्डका कयौं नागरिकले आफ्ना महत्वपूर्ण काम त स्थगित गरेकै छन्, विवाहको मितिसमेत परिर्वतन गरेका छन् ।
इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीचको खेल नेपाली समयअनुसार पौने ८ बजे हुने छ । इंग्ल्याण्को समयअनुसार भने खेल दिउँसो हुने छ । अहिले दिउँसो त्यहाँ असाध्यै गर्मि हुन्छ । खेल हुने समयको तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियस हुने अनुमान गरिएको छ । तर, गर्मीको त्यहाँका नागरिकमा कुनै प्रवाह छैन ।
अहिले इंग्ल्याण्डका शहरका चोक-चोकमा स्वीडेनसँग हुने खेल हेर्न ठूला स्क्रीन जडान गरिएका छन् । लाखौं फुटबल समर्थक बस्ने ठाउँमा स्क्रीन जडान गरिएका छन् । त्यहाँका नागरिकले भनेका छन्, हामी इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीच हुने खेल हेर्न निकै आँतुर छौं । हामीले महत्वपूर्ण कामलाई थाती राखेर खेले हेर्ने योजना बनाएका छौं ।’
इंग्ल्याण्डको इप्सबीचमा बसोबास गर्दै आएका दानी जोर्डनले खेल हेर्नका लागि आफ्नो भाइको विवाह मिति सारेको बताए । उनले भने, भोलि भाइको विवाह मिति तोकिएको थियो तर खेल पनि भोलि नै भएकाले मिति सारेका छौं ।’
ठाउँ-ठाउँमा ठूलो पर्दामा खेल हेर्नका लागि व्यवस्था गरिएकाले दर्शकको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ । कुनै अप्रिय घटना नहुन् भनेर विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो ।
यदि इंग्ल्याण्डले खेल हारेमा विभिन्न किसिमका घटना हुन सक्ने आशंकालाई मध्येनजर गर्दै पनि सुरक्षाकर्मीको ठाउँ-ठाउँमा बाक्लो उपस्थिती बढाइएको छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, Inglind vs Sweden